बखतले भेटाएको २ करोड रुपैयाँ प्रहरीलाई बुझाए ! (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
बखतले भेटाएको २ करोड रुपैयाँ प्रहरीलाई बुझाए ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । अहिलेका भाइरल व्यक्ति बखत बिष्टले भेटाएको २ करोड रुपैयाँ प्रहरीलाई बुझाएका छन् । उनले यति ठूलो रकम वास्तविक रुपमा नभई टेलिश्रखलामा मात्र बुझाएका हुन् । बखतले चर्चित हास्य टेलिश्रखला ‘मेरी बास्सै’ मा भेटाएको पैसा प्रहरीलाई बुझाएका छन् । थप हेर्नुस् यो भिडियोमा-
ट्याग्स: Bakhat Bist